Barnoota Archives - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota
Hoogganoonni DhDUO fi hojjattoonni mootummaa Finfinnee jiraatan ijoollee isaanii manniin barnoota Gen. Taaddasaa fi Gen....
Admin - Jul 21, 2017
Yunivarsiitii booda daandilee 5’n barumsa dabalataa ittiin argachuun danda’amu
Admin - Sep 7, 2015 1
Yunivarsiitii irraa eebbifamuu jechuun beekumsa gahaa argachuu ykn dhuma daandii beekumsaati jechuu miti. Dhugaan jiru kana ta’ee osoo jiru, namnoonni heddu garuu erga eebbifamanii...
Barnoonni sadarkaa ol’aanaa kaffaltii malee gama intarneetiin kennamu namoota miliyoona heddu...
Admin - Mar 13, 2015 0
Barnoonni gama intarneetiin kennamu (Massive Online Courses-MOOCs) yeroo dhihoo as hedduu babal'ataatiin kan dhufe. Gama intarneetiin barnoonni kennamu akaakuu barnootaa hunda kan ammatu yoo...
Bariituu Jaalataa Ahmad mana barnootaa Gaara Mul’ataatti ijaara jetti
Admin - Feb 24, 2015 1
Bariituu Jaalataa Ahmad, umriin 14, woldorgommii sadarkaa idiladdunyaatti barattoota gola 8 jiddutti geggeeffame injifatte. Injifannoon isiin gonfatte kan maatii isiifi hunda keenya boonsu. Gochi isii gaariin...
Admin - Dec 30, 2014 0
Sammuu qaraafi abshaala, isa IQ guddaa, qabaachuu kan hinfeene jira hinse'u. Garuu abshaalummaafi qaroomini sammuu waan akkasumatti hawwii qofaan argamu, bira gahamuu miti. Sammuu...
Maxxansaan Afaan agarsiisa kitaabaa magaalota heddu keessatti geggeessuuf
Admin - Dec 23, 2014 0
‘Afaan Campiagn’ sochiin kitaaba Afaan Oromoo qulqullinnaafi qabiyyee aadaa qaban ijoollee Oromoo biyya keessaafi biyyoota addunyaa biroo keessa jiraatan hunda biraan gayuu irratti xiyyeefate,...
Dhiha Aafrikaatti sababa Iboolaaf jecha ijoollee miliyoona 5tu barnoota irraa badan
Admin - Dec 4, 2014 0
Giinii, Laaybeeriyaa fi Seeraliyoon keessatti Iboolaan ijoolleen miliyoona 5 ol ta’an mana barumsaatii akka bahan taasisuu isaa gabaafame. Manni barnootaa fi waajjiroonni mootummaa daddarbiinsa...
Apps Barnoota Sad. 2ffaa Barattoonni akka Salphatti akka Qayyabatan Taasisan
Admin - Nov 13, 2014 0
Barnoonni gola keessatti barsiisaan isiniif laatu qajeelatti hinhubbanee? Heerregaa fi fiiziksiin isinitti hinjabaannee? ‘Bilbila qaroo’ qabduu? Intarneetitti dhimma baatuu? Deebiin keessan gaafilee kanniin...